Ukugcinwa kwe-Apple TV 4K, iApple Watch Series 3 kunye ne-iPhone 8 ukuqala | Ndisuka mac
Ukugcinwa kwe-Apple TV 4K, iApple Watch Series 3 kunye ne-iPhone 8 ukuqala
Sikho nge-15 kaSeptemba nanjengoko iApple ibhengeze inqaku layo eliphambili ngoLwesibini we-12 kaSeptemba, inkampani yaseCupertino Ukugcinwa kwe-Apple TV 4k, iApple Watch Series 3 kunye neemodeli ezintsha ze-iPhone 8 kunye ne-iPhone 8 Plus kuqala namhlanje.
Kule meko sinokhetho oluninzi lokwenza ugcino lweemveliso ezintsha kunye neyona nto intle njengokuhlala siyenza kwi-Intanethi iwebhusayithi yenkampani okanye enye Kwisixhobo sethu se-iOS esisebenzisa iApple, Ivenkile yeApple, kodwa singaya ngqo kwiVenkile yeApple esemthethweni okanye kumthengisi ogunyazisiweyo weApple kwaye senze ukubhukisha.
Kubalulekile ukwenza oku kubhukisha ngokukhawuleza ukuba siceba ukuthenga into ukuze singalibazisi ukuthunyelwa kwakhona. I-Apple yenza ukuthunyelwa emva komyalelo wokubhukisha kwaye oku kugcinwa kuyenyuka ngokuhamba kweeyure, oko kuthetha ukuba ukuba sifuna ukufumana i-Apple TV okanye iApple Watch Series 3 kwangolo suku, nge-22 kaSeptemba, ngela xesha baya kuqala ukufikelela kubasebenzisi, kufuneka sibhukishe ngokukhawuleza.
Enye inkcukacha ebalulekileyo kukucaca ukuba yeyiphi imodeli esifuna ukuyithenga kwaye ngakumbi abo bazokwazisa i-iPhone entsha 8. I-Apple okwangoku inenombolo elungileyo yee-iPhones ezithengiswayo kwaye ngaphandle kwamathandabuzo ikhetha eyona ilungele thina. ayingomsebenzi olula. Kwimeko ye-Apple TV 4k, ukhetho luya kuxhomekeka kumthamo nakwi-Apple Watch Series 3, ngokufanayo ne-iPhone, iimodeli ezininzi kwaye zonke zinomdla. Kufuneka kuqatshelwe ukuba I-Apple Watch ayinayo imodeli ye-LTE eSpain, Ke ukuba ufuna ntoni ukwenza umnxeba kunye nokuzimela okuthile kwi-iPhone, kungcono ukuba ulinde ukuthenga.
Ubhukisho sele lukhona, sele uyenzile eyakho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ukugcinwa kwe-Apple TV 4K, iApple Watch Series 3 kunye ne-iPhone 8 ukuqala
Iimuvi njengemvelaphi yedesktop kwiMac ene "desktopCinema" Ngoku simahla!
Ivenkile entsha yeApple kwiChicago River ukuvula i-Okthobha 20